နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးအတွက် လိုအပ်လာလျှင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် အဆိုပြုသည့်အခါ ချက်ချင်း အသက် ဝင် လာမည့် ပြည်သူ့စ စ်မှုထမ်းဥပဒေ – Thadin Media
နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးအတွက် လိုအပ်လာလျှင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် အဆိုပြုသည့်အခါ ချက်ချင်း အသက် ဝင် လာမည့် ပြည်သူ့စ စ်မှုထမ်းဥပဒေ
March 5, 2018 March 5, 2018 adminPloitical
တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့်သူများ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၃၅ နှစ် ထိ အမျိုးသား အားလုံး ။ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၇ နှစ်ထိ အမျိုးသမီးများ အားလုံး ။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဖြစ်လျင်…. အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၄၅ ထိ အမျိုးသား အားလုံး ။ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၃၅ နှစ်ထိအမျိုးသမီးများ အားလုံး။ ကင်းလွတ်ခွင့်ရသူများ သာသနာ့ ဝန်ထမ်းများ ( မည်သည့် ဘာသာမဆို ) အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးများ။ သားသမီး ရှိသော အိမ်ထောင်ပျက် အမျိုးသမီးများ။ ဆေးစစ်ဆေးချက်အရ စစ်မှုထမ်းရန် မသင့်လျော်သူ ။ စစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရေး ဗဟို အဖွဲ့က သီးခြားအမိန့်ထုတ်ပြန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသူများ။ ယာယီ ကင်းလွတ်ခွင့်ရသူများယာယီ ဆေးအဆင့်နိမ့်နေသူများ။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ။ ပညာသင်ကြားနေသူများ။ အခြား ပြုစုစောင့်ရှောက်မည့်သူမရှိသည့် မိအိုဖအိုတို့ကို ပြုစုလုပ်ကျွေးနေသူများ။ မူးယစ်ဆေးဖြတ် ကုသမှုခံယူနေသူများ နှင့် ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသူများ။ (ယာယီ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားချိန်တွင်. အသက်ကန့်သတ်ချက် ကျော်လွန်သွားလျှင်ကင်းလွတ်ခွင့်မပြုပါ။ မဖြစ်မနေ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရမည် )
စစ်မှုထမ်းကာလ သာမန် လူများ အတွက် ၂ နှစ်ဖြစ်ပြီး ပညာသည်များ အတွက် ၃ နှစ်ဖြစ်သည်။ (အရေးပေါ် အခြေအနေများတွင် မည်သူ့ကို မဆို စစ်မှုထမ်းကာလ ၅ နှစ်အထိ သက်တမ်း တိုးမြှင့်နိူင်သည်) အရန်တပ်ဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၂ အရတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအားလုံးကို စစ်မှုထမ်းဆောင်ရန် ပြန်လည်ဆင့်ခေါ်နိူင်ပါသည်။
ထိုသို့ဆင့်ခေါ်ခံရသော စစ်မှုထမ်းဟောင်းများ သည် တပ်မတော်တွင် နောက်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောရာထူးနှင့်စစ်ဝတ်စုံတို့ကို သုံးစွဲခွင့်ပြုသည်။ စစ်မှုထမ်းဆောင်ရသူများ အားလုံးသည် ၁၉၅၉ ခုနှစ် တပ်မတော်အက်ဥပဒေကို လိုက်နာရမည်။ စစ်မှုထမ်းကာလအတွင်း ပြစ်မှုတစ်စုံတစ်ရာ ကျူးလွန်လျှင် စစ်တရားရုံး မှ ဖြစ်စေ နယ်ဘက် တရားရုံး မှ ဖြစ်စေ ချမှတ်သော ပြစ်ဒဏ်ကာလကို စစ်မှုထမ်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုပဲသတ်မှတ်ကာလပြည့်သည်အထိ စစ်မှုထမ်းဆောင်ရမည်။ စစ်မှုထမ်းကာလအတွင်း အဆင့်လိုက် လစာနှင့်စရိတ်များ ခံစားခွင့်ရရှိပါမည်။
တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ကျဆုံးခဲ့ပါက တပ်မတော်မှသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ခံစားခွင့်များရရှိပါမည်။ စစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်စာကိုသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ထံ တိုက်ရိုက်ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပြီး မတွေ့ရှိခဲ့လျှင် မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးအား သက်သေတစ်ဦးရှေ့တွင် ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုသို့ပေးအပ်ခြင်းသည် ဥပဒေအရ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူပါလိမ့်မည်။
ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၃ အရ မှတ်ပုံတင်ဖို့ဆင့်ခေါ်ချိန်၌ ပျက်ကွက်လျှင် ဆေးစစ်ဖို့ဆင့်ခေါ်ချိန်၌ ပျက်ကွက်လျှင် စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင့်ခေါ်ချိန်၌ ပျက်ကွက်လျှင် မှတ်ပုံတင်ချိန်၌ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို လိမ်လည်ရေးသား ဖော်ပြလျှင် ထောင်ဒဏ် ၃နှစ် ကျခံရပါမည်။ -ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄ အရ…… စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ရှောင်လွဲရန်အတွက် ရောဂါရှိဟန်ဆောင်ခြင်း၊ တမင် ရောဂါရအောင်လုပ်ခြင်း၊ ရောဂါကို မပျောက်အောင် ပိုဆိုးလာအောင်လုပ်ခြင်း၊ အနာတရ ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းတို့အတွက်ကျူးလွန်သူအား ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်၊ အားပေးကူညီသူအား အရပ်သားဖြစ်လျှင် ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်၊ ဝန်ထမ်းဖြစ်လျှင် ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ် ကျခံရပါလိမ့်မည်။ ရဲအရေးပိုင်သောပြစ်မှုများ အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည် ။
sit nyein aung
တာဝနျထမျးဆောငျရမညျ့သူမြား အသကျ ၁၈ နှဈမှ ၃၅ နှဈ ထိ အမြိုးသား အားလုံး ။ အသကျ ၁၈ နှဈမှ ၂၇ နှဈထိ အမြိုးသမီးမြား အားလုံး ။ ကြှမျးကငျြပညာရှငျ ဖွဈလငျြ…. အသကျ ၁၈ နှဈမှ ၄၅ ထိ အမြိုးသား အားလုံး ။ အသကျ ၁၈ နှဈမှ ၃၅ နှဈထိအမြိုးသမီးမြား အားလုံး။ ကငျးလှတျခှငျ့ရသူမြား သာသနာ့ ဝနျထမျးမြား ( မညျသညျ့ ဘာသာမဆို ) အိမျထောငျသညျ အမြိုးသမီးမြား။ သားသမီး ရှိသော အိမျထောငျပကျြ အမြိုးသမီးမြား။ ဆေးစဈဆေးခကျြအရ စဈမှုထမျးရနျ မသငျ့လြျောသူ ။ စဈမှုထမျးဆငျ့ချေါရေး ဗဟို အဖှဲ့က သီးခွားအမိနျ့ထုတျပွနျ ကငျးလှတျခှငျ့ပွုသူမြား။ ယာယီ ကငျးလှတျခှငျ့ရသူမြားယာယီ ဆေးအဆငျ့နိမျ့နသေူမြား။ နိုငျငံ့ဝနျထမျးမြား ။ ပညာသငျကွားနသေူမြား။ အခွား ပွုစုစောငျ့ရှောကျမညျ့သူမရှိသညျ့ မိအိုဖအိုတို့ကို ပွုစုလုပျကြှေးနသေူမြား။ မူးယဈဆေးဖွတျ ကုသမှုခံယူနသေူမြား နှငျ့ ထောငျဒဏျကခြံနရေသူမြား။ (ယာယီ ကငျးလှတျခှငျ့ပွုထားခြိနျတှငျ. အသကျကနျ့သတျခကျြ ကြျောလှနျသှားလြှငျကငျးလှတျခှငျ့မပွုပါ။ မဖွဈမနေ တာဝနျ ထမျးဆောငျရမညျ )
စဈမှုထမျးကာလ သာမနျ လူမြား အတှကျ ၂ နှဈဖွဈပွီး ပညာသညျမြား အတှကျ ၃ နှဈဖွဈသညျ။ (အရေးပျေါ အခွအေနမြေားတှငျ မညျသူ့ကို မဆို စဈမှုထမျးကာလ ၅ နှဈအထိ သကျတမျး တိုးမွှငျ့နိူငျသညျ) အရနျတပျဖှဲ့ ဥပဒပေုဒျမ ၂ အရတပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျသညျ စဈမှုထမျးဟောငျးမြားအားလုံးကို စဈမှုထမျးဆောငျရနျ ပွနျလညျဆငျ့ချေါနိူငျပါသညျ။
ထိုသို့ဆငျ့ချေါခံရသော စဈမှုထမျးဟောငျးမြား သညျ တပျမတျောတှငျ နောကျဆုံးတာဝနျထမျးဆောငျခဲ့သောရာထူးနှငျ့စဈဝတျစုံတို့ကို သုံးစှဲခှငျ့ပွုသညျ။ စဈမှုထမျးဆောငျရသူမြား အားလုံးသညျ ၁၉၅၉ ခုနှဈ တပျမတျောအကျဥပဒကေို လိုကျနာရမညျ။ စဈမှုထမျးကာလအတှငျး ပွဈမှုတဈစုံတဈရာ ကြူးလှနျလြှငျ စဈတရားရုံး မှ ဖွဈစေ နယျဘကျ တရားရုံး မှ ဖွဈစေ ခမြှတျသော ပွဈဒဏျကာလကို စဈမှုထမျးကာလအတှငျး ထညျ့သှငျးစဉျးစားခွငျးမပွုပဲသတျမှတျကာလပွညျ့သညျအထိ စဈမှုထမျးဆောငျရမညျ။ စဈမှုထမျးကာလအတှငျး အဆငျ့လိုကျ လစာနှငျ့စရိတျမြား ခံစားခှငျ့ရရှိပါမညျ။
တာဝနျထမျးဆောငျစဉျ ကဆြုံးခဲ့ပါက တပျမတျောမှသတျမှတျထားသညျ့အတိုငျး ခံစားခှငျ့မြားရရှိပါမညျ။ စဈမှုထမျးဆငျ့ချေါစာကိုသကျဆိုငျရာပုဂ်ဂိုလျထံ တိုကျရိုကျပေးအပျမညျဖွဈပွီး မတှရှေိ့ခဲ့လြှငျ မိသားစုဝငျတဈဦးဦးအား သကျသတေဈဦးရှတှေ့ငျ ပေးအပျပါလိမျ့မညျ။ ထိုသို့ပေးအပျခွငျးသညျ ဥပဒအေရ သကျဆိုငျရာပုဂ်ဂိုလျလကျထဲသို့ ပေးအပျခဲ့ပွီးဖွဈသညျဟု မှတျယူပါလိမျ့မညျ။
ပွညျသူ့စဈမှုထမျးဥပဒေ ပုဒျမ ၂၃ အရ မှတျပုံတငျဖို့ဆငျ့ချေါခြိနျ၌ ပကျြကှကျလြှငျ ဆေးစဈဖို့ဆငျ့ချေါခြိနျ၌ ပကျြကှကျလြှငျ စဈမှုထမျးဖို့ဆငျ့ချေါခြိနျ၌ ပကျြကှကျလြှငျ မှတျပုံတငျခြိနျ၌ အကွောငျးအရာတဈခုခုကို လိမျလညျရေးသား ဖျောပွလြှငျ ထောငျဒဏျ ၃နှဈ ကခြံရပါမညျ။ -ပွညျသူ့စဈမှုထမျးဥပဒေ ပုဒျမ ၂၄ အရ…… စဈမှုထမျးခွငျးမှ ရှောငျလှဲရနျအတှကျ ရောဂါရှိဟနျဆောငျခွငျး၊ တမငျ ရောဂါရအောငျလုပျခွငျး၊ ရောဂါကို မပြောကျအောငျ ပိုဆိုးလာအောငျလုပျခွငျး၊ အနာတရ ဖွဈအောငျလုပျခွငျးတို့အတှကျကြူးလှနျသူအား ထောငျဒဏျ ငါးနှဈ၊ အားပေးကူညီသူအား အရပျသားဖွဈလြှငျ ထောငျဒဏျတဈနှဈ၊ ဝနျထမျးဖွဈလြှငျ ထောငျဒဏျသုံးနှဈ ကခြံရပါလိမျ့မညျ။ ရဲအရေးပိုငျသောပွဈမှုမြား အဖွဈသတျမှတျထားသညျ ။